Faallo: Maalin la sugayo ‘8da Febraayo’ – Kasmo Newspaper
Faallo: Maalin la sugayo ‘8da Febraayo’
Updated - February 5, 2017 1:39 pm GMT
Maanta, 5 Febraayo 2017, waxaa soo dhammaaday khudbado laga hor-jeedinayey xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka.
Mudanayaashu waxay u soo dhabar-adaygeen in ay dhegaystaan, saacado badan, musharraxiin aftahan ah. Kuwaas oo nin walba qoraal uu soo diyaarsaday meesha ka jeediyey waxa uu qaban doono, haddii 4taa sano ee soo socota loo doorto Madaxweynaha.
Musharraxiintaas waxaa ku jira Xasan Sheekh Maxamuud, oo sheegtay guulo uu gaaray afartii sano oo hore iyo in wax qabyo ka yihiin, oo fursad loo siiyo in uu qaybyadaas dhammaystirto!
Waxaase yaab leh in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhiirado in uu mudanayaasha Baarlamaanka soo hor-istaago, oo weliba uu musharrax yahay!
Marka uu sidaas yeelayo, Xasan wuxuu dhayalsanayaa waddaniyadda, dadnimada iyo dareenka qarameed ee ummadda Soomaaliyeed. Kuwaas oo uusan ku harin war dambe iyo wax ay yiraahdaan.
Waa hadleen, gudo iyo dibed, haddii ay aqoonyahan iyo suugaanleey ahayd. Haddii ay ganacsato, ururro bulsho, hoggaamiye dhaqameed, ciidan iyo warbaahin ahayd; iyo haddii culumo iyo caamo ay lahaayeen.
Soomaaliyi waa hadashay, oo sheegtay in ayan masiirkeeda u dhiiban karin Xasan Sheekh. Baarlamaanka ayaa maanta weli go’aanku gacantooda ku jiraa, waxaana taariikhdu ku xukumi doontaa, wanaag iyo xumaan, halka ay dhigaan masiirka dalka.
Rajadu waa in ay isbeddel keenaan, oo 8da Febraayo 2017 noqoto maalin guuleed. Maalin hanka iyo qabka dadka Soomaaliyeed kor u soo qaadda.